Iingcebiso zeTattoo abavelisi, abaxhasi - iTattoo Iingcebiso zeTatoo
Iingcebiso zePlastiki ezilahliweyo
Iimpawu: elubala, ultra-ezingcakacileyo, ukugcinwa inki ngakumbi. 1. Incam yenaliti yenziwe ngezinto ezi-translucent, nto leyo eyenza ukuba kube lula ukujonga inaliti; 2.Ukuyilwa kwethambeka eliguqukayo, ukugcinwa kweinki ngakumbi kunye nokutyibilika; 3. Udonga olusecaleni lomlomo lu-ultra-thin, okwenza kube lula ukufumana inaliti kwaye ungashiyi ndawo. Iingcebiso malunga nokukhetha imilomo yenaliti yeenaliti zetattoo: Iinaliti ezijikelezileyo (RL, RS) zixhotyiswe ngemilomo yeenaliti ze-R, kunye neentloko zepini (F, M1, M2, RM) zixhotyiswe ngemilomo ye-F. Phakathi t ...
Ezilahlayo ezingabonakaliyo ezibonakalayo zealiti zetattoo
Imveliso yemveliso: umgangatho ophezulu wePlastiki umbala weMveliso: emhlophe kunye neselubala Ubunzima bemveliso: malunga ne-100g / ibhokisi Inkcazo yemveliso: ibhokisi yeebhokisi ezili-100, ibhokisi engama-50, ukupakishwa kweblister, ukucoceka nokucoceka, ngoku kukho iimodeli ezingama-30 onokukhetha kuzo kwiingcebiso yokukhetha imilomo yenaliti yeenaliti zetattoo: Iinaliti ezijikelezileyo (RL, RS) zixhotyiswe ngemilomo yenaliti ye-R kunye no-D, kunye neentloko zepini (F, M1, M2, RM) zixhotyiswe ngemilomo yeenaliti ze-F. Phakathi kwabo, i-M2 ngumqolo ophindwe kabini, kwaye umlomo wenaliti ofanayo u-hal ...
Izaqhwithi zeblue zeplastiki ezilahlwayo ngeengcebiso ngeGrip Stop
Ubukhulu: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D I-17F i-pre-sterilized short elahlayo yeTattoo Izinto eziphathekayo: iiplastiki eziphezulu zenziwe ngezinto eziphezulu, kulula ukusebenza, zilula kakhulu. Iingcebiso ze tattoo zinokukukhusela kusulelo lwentsholongwane. Ingcaciso yeMveliso 1.Umgangatho ophezulu kunye nembonakalo yefashoni; 2.Easy ukusebenza; 3.yilo lobungcali, lusempilweni, lukhuselekile, alutyibiliki 4.Ixabiso lokhuphiswano; 5.Ukuziva okuhle kwaye kukhululekile xa usebenzisa i ...
Kuthengiswa nge-BOX OF 50 Size: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F-9F-11F -13F-15F-17F Umgangatho ophezulu wePlastiki okhuselekileyo unqanda ukugoba kwangaphambili I-EO yegesi ngokwahlukileyo i-Blister Packaged Iyahambelana nayo yonke i-tattoo Grips Ubungakanani bethiphu yobude obuchanekileyo Ubude: 50mm Inkcazo yeMveliso Iqhwithi elilahlayo lesipikili lenziwe ngeplastikhi yonyango, ekhuselekileyo kunye nococeko. Ingcebiso eyilwe kakuhle ivumela ukufakwa kwenaliti egudileyo kunye nokuhamba kwe-inki. Inqaku elibonisa ngokucacileyo ukuba umbala we-id kulula ...
Cacisa ii-108mm zeSterilized Tips nge-Grip Stop Transparent yeXesha elide elinokulahlwa Iingcebiso zeTattoo
Iingcebiso ezikumgangatho ophezulu ze tattoo, iingcebiso zobuchwephesha ezingenabungozi kunye nezingenabungozi. Umgangatho ophezulu kunye neengcebiso ezingasasebenziyo ezilahlwayo zeTattoo Iingcebiso zeTattoo ezinde zenaliti yeTattoo Igama leMveliso: Ezilahlwayo Iingcebiso zeTattoo zoSayizi ezifumanekayo: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D- 9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F-9F-11F-13F-15F ** 5M-7M-9M-11M-13M-15M Inombolo yemodeli: ZZ-010 Ukupakisha: 50Pc / ibhokisi MOQ: 10 iibhokisi Umgangatho: 1 Class Igama leMveliso: Iingcebiso zeTattoo Izinto: Ukupakisha kwePlastiki: ii-50pcs / ibhokisi, zipakishwe ...
Iingcebiso eziMnyama ze-108mm ezinyanzelisiweyo nge-Grip Stop Long ezilahlwayo zeNgcebiso zeTattoo kwiinaliti zeTattoo yesiNtu
I-108mm emnyama yeTattoo Iingcebiso ngokuma kokubamba Ubungakanani obukhoyo: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F -9F-11F-13F-15F R: esetyenziselwa i-liner ejikelezayo kunye neenaliti ze-shader F: isetyenziselwe iinaliti ezithe tyaba kunye nemagnum D: Iingcebiso zedayimane zinokusetyenziselwa i-liner ejikelezayo okanye iinaliti ze-shader, nangona zihlala zisetyenziselwa ukuloba njengohlobo lwe incam ivumela ulawulo ngakumbi ngokuchasene nentshukumo yenaliti ngelixa unikezela indawo yokuhamba kwe-inki. Intshayelelo: Ithengiswa yi-BOX YAMA-50 akumgangatho ophezulu ...